VaChamisa Vanosvitsa Mapepa Avo kuConstitutional Court
Mutungamiri weMDC Alliance, VaNelson Chamisa, vasvitsa mapepa avo kudare redzimhosva vachida kuti zvakabuda musarudzo dzakaitwa musi wa30 Chikunguru zvisendekwe parutivi.
Magweta aVaChamisa vaita chipatapata kuti vabate nguva yekusvitsa mapepa kudare repamusoro-soro reConstitional Court sezvo Chishanu ranga riri zuva rekupedzisira kuti vapikise zvakabuda musarudzo pasi pemitemo inobata sarudzo..
Rimwe remagweta aVaChamisa, VaThabani Mpofu, vati chasara yave nyaya yekuti vatongi vachinzwa nyaya iyi.
VaMpofu vati vasvitsa humbowo hwakati tsvikiti kudare hunoratidza kuti sarudzo idzi dzakabirirwa.
Vati chikuru pahumbowo hwavanahwo ndechekuti zvakaziviswa nekomisheni inoona nezvesarudzo zvakasiyana nezviri pamapepa akasainwa nevaimirira mapato panzvimbo dzaivhoterwa kana kuti ma V11 forms.
Vatiwo vari kutyisidzirwa zvikuru nekumirira kwavari kuita VaChamisa panyaya iyi asi vati havasi kuzodzokera kumashure.
Mapepa asvitswa kudare aya asvitswawo kune vese vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, sachigaro weZimbabwe Electoral Commission, Zec, Amai Priscilla Chigumba, pamwe nemukuru anoona nezvesarudzo muZec, VaUtoile Silaigwana, kuti vapindure kudare.
Hatina kukwanisa kutaura naVaMnangagwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi .
Asi neChina VaMnangagwa vakati havazoenderera mberi nehurongwa hwekugadzwa kwavo kudzamara nyaya yapera kunzwikwa nematare sezvataurwawo naVaMpofu kuti kugadzwa kwanga kuchida kuitwa naVaMnangagwa kwave kufanira kutomiswa.
Mumiriri waVaMnangagwa, VaZiyambi Ziyambi, uye vari gurukota rezvemitemo, vazivisa kuti hurongwa hwekugadza VaMnangagwa semutungamiri wenyika hwanga huchida kuitwa neSvondo, hwambomiswa zvichitevera danho ratorwa naVaChamisa.
Dare rine mazuva gumi nemana ekuti ringe rabuda nemutongo waro panyaya iyi.
Dare iri rinogona kuti zvikaburitswa neZec ndizvo zviri pamutemo, kanawo kubuda nemutongo wekuti VaChamisa ndivo vakakunda musarudzo kana richinge ragutsikana nehumbowo, kanawo kuti sarudzo iyi idzokororwe.
Zvarinotura hazvipikiswe, uye warinenge rati ndiye akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika ndiye anobva agadzwa mukati memaawa makumi mana nemasere.
VaChamisa vanoti ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika kunyange hazvo Zec yakazivisa kuti VaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika.